Zvinongedzo zvekuburitsa kwakananga kweIOS 8.1 | IPhone nhau
Sezvatakakuyambirai maminetsi mashoma apfuura, iOS 8.1 yave kuwanikwa kurodha pasi. Sarudzo yakanyanya kugadzikana yekuvandudza iri kuburikidza neOTA kubva kuZvirongwa menyu yezvishandiso zvedu asi kana tichida, tinogona zvakare kuisa firmware tichishandisa iTunes uye kurodha pasi manyore Yakazara vhezheni yeIOS 8.1.
Pazasi iwe une runyorwa neiyo zvinongedzo zvekuburitsa zvakananga kweIOS 8.1 kubva kumaseva eApple, nenzira iyi iwe unowana bandwidth yepamusoro inokwanisa kuitira kuti kurodha kuridze nekukurumidza
iPad Air 2 (chizvarwa chechitanhatu WiF)
iPad Mhepo 2 (chizvarwa chechitanhatu Cellular)
iPad Mhepo (yechishanu chizvarwa CDMA)
iPad 3 Wi-Fi + Mataira
Kamwe kurodha pasi kwapera, isu tinofanirwa enda kuTunes uye tinya kiyi pane yedu keyboard kuti zvichienderana nekuti tinoshandisa Windows kana Mac, ichave imwe kana imwe. Panyaya yeWindows, isu tinofanirwa kubata iyo Shift kiyi (Shift) tisati tadzvanya iyo Yekuvandudza kana Kudzorera bhatani uye kana tikashandisa Mac, iyo kiyi yekutsikirira ichave iyo Alt kiyi.
Kana zvese zvikafamba mushe, hwindo idzva rinozovhura iro rinotisiya enda kunzira iyo ine vhezheni yeIOS 8.1 yatakatora pasi. Isu tinongofanirwa kusarudza iyo yakadhawunirodha faira uye rega maitiro acho apedze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 8 » Zvinongedzo zvekuburitsa kwakananga kweIOS 8.1
Maminetsi gumi nemashanu ekushandisa anga akwana kutanga kuona kutadza kwemifananidzo. Muchikamu chekuseta / Mifananidzo, dzimwe nguva sarudzo dzekuisa dzakaputika mifananidzo dzinoonekwa dzakadzokororwa.
Zvinotaridza kuti, hongu, kudzikama kwesystem mu iPhone 6 (pamwe mune 64-bit kuvaka) kwave nani kubvira muna5S maApplication ekushandisa aishaya kukundikana senge ari 6 pamwe neapo neapo reboot yeiyo SpringBoard.
Zvino izvo, hongu, Apple iri kuratidza kure. Uye kudzora kwaro kwemhando yepamusoro kwatotanga kumira. Nguva dzese iOS painotaridzika senge "posh" Android. Pachokwadi. Kana ini ndikabhadhara yakakwira mari yeakanaka-akasanganiswa Hardware / software mhinduro uye pamutengo wekaviri kana katatu izvo zvinowedzerwa nemimwe mhinduro, ini ndinotarisira imwe mhando shoma.
Rega ndikutaurire kuti wakakanganisa nezvazvo zuva rega rega rinotaridzika senge android nembugs, uye gare gare kushoropodza mamwe masystem uye mumwe munhu anovaudza kuti iwe une iwo matatu masystem iOS, Android uye WP
IOS 8.1 inoshanda sei? mune imwe posvo vakataura nezvezvinetso zvekuzvitonga asi hapana chimwe chinotaurwa. Uri kuita zvakanaka here? Iwe unokurudzira kuvandudza?
Nacho, ndatenda nekundigonesa kurasikirwa kwezuva rese! Ndatenda, ini ndichatsanangura kuti nei ndatova nechidimbu che ..
Ndine ipad air wifi yakawanda maseru, ini ndinotora iyo vhezheni uye zuva rinotevera, mushure mekurodha pasi husiku hwese uye masikati ese nhasi yatorwa pasi, kana ndichigara munyika uye ndine dhawunirodhi yekumhanya ye100kbps, saka pandinoita Backup uye ini ndave kuda kuidzosa inondiudza "iyo vhezheni haienderane nechishandiso" zasca, ndakakatyamadzwa, maita basa, maita basa chaizvo uye ndine chokwadi chekuti hamuzombokumbira ruregerero nekuti ndinofunga kukanganisa kwakadai zvinosuwisa.
Chokwadi ikozvino ndatarisa uye iwe une zvinongedzo zvachinja iyo ipad mweya wifi iyo ine nhare, yakanaka kwazvo, bravo.
PS: Ini ndinodzoreredza nekuti bhatiri riri kuenda zvakashata kwazvo ini ndakagadzirisa pandakanga ndiri mutirongo kusvika ndasvika ios 8.0.1 uye zvave zvinouraya saka ndakafunga kudzorera kubva ku0 neshanduro 8.1, asi hapana chinhu ipad yangu ichafanirwa kuramba ichitambura a zuva kana kupfuura
Anonimous, izvo zvinongedzo zvakakwana, hapana kukanganisa mune zvinongedzo. Iyo iPad 4,2 ndiyo vhezheni ine WiFi + LTE uye iyo 4,1 chete iyo Wi-Fi.
Mhoro ndinoda rubatsiro rwako handikwanise kushandura ios yangu 8.3 kuenda ku8.1 handigone kudzorera nekuti inondiudza ^ haina kukwanisa kudzoreredza nekuti dambudziko raitika kukanganisa kusingazivikanwe 3194 kana uchikwanisa kundibatsira ndapota
Pindura kuna martha
Juan Camilo Misoro Riva akadaro
Ndingaite sei kurodha pasi ios7
Pindura Juan Camilo misoro riva
Ghffvg mutongi akadaro
Pindura Ghffvg mutongi
Maitiro ekumisikidza mameseji kubva kuMac yako
Maitiro ekumisikidza iyo Hey Siri! pa iPhone ine iOS 8